साङ्लाले सताएर हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् साङ्ला भगाउने यी ४ घरेलु उपाय - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»साङ्लाले सताएर हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् साङ्ला भगाउने यी ४ घरेलु उपाय
By रिता घिसिंग on ५ माघ २०७४, शुक्रबार ०९:४७ स्वास्थ्य/जीवनशैली
सामान्यतया घरमा ओसको मात्रा बढी हुँदा साङ्लाहरुलाई रहन वा बच्न सहज हुन्छ । साङ्लाहरुको आवास भनेकै भान्साको आसपास खाने कुरा भएको ठाउमा नै हुने गर्दछ ।
बजारमा साङ्ला भगाउन मार्नका लागि अनेक तरहका रसायनिक औषधि पाइन्छन् । तर, यी औषधीहरु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छन् । यदि घरमा साना बच्चा छन् भने रासायनिक औषधि होइन, घरेलु उपाय नै अपनाउनु बुद्धिमतापूर्ण कार्य हुन्छ ।
सोडा र चिनी
साङ्ला रहनको लागी ओसिलो ठाउँ अतिनै अनुकूल मानिन्छ । त्यसैले पनि आफ्नो भान्सा कोठालाई ओसमुक्त राख्नुभयो भने पनि साङ्लाबाट केही हदसम्म भएपनि राहत हुन्छ।